Qaddiyadda Maal-gelinta Dekedda Berbera oo Bedka Soo Dhigtay Heerka ay Gaadhsiisan Tahay Awoodda Diblomaasiyadeed ee Somalia |
Qaddiyadda Maal-gelinta Dekedda Berbera oo Bedka Soo Dhigtay Heerka ay Gaadhsiisan Tahay Awoodda Diblomaasiyadeed ee Somalia
Hargeisa(GNN):-Jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ee fadhigeedu yahay New York ayaa markii ugu horraysay ka hadashay dacwad ay Somalia u gudbisay oo ka dhan ahayd heshiiska dekedda Berbera ee ay wada saxeexeen Somaliland, Itoobiya iyo Imaaraadku.
Ku xigeenka afhayeenka Qaramada Midoobay Farhan Haq waxa uu sheegay in khilaafka u dhexeeya UAE iyo Soomaaliya u baahan yahay in lagu xalliyo wada hadal labada dal dhexmara “Waa khilaaf u baahan in lagu xalliyo hannaan laba geesood ah oo dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta,” Sidaas ayuu sheegay afhayeenka u hadlay Qaramada Midoobay sheegay Arbacadii shalay.
Hase yeeshee jawaabtan ka soo yeedhay Qaramada midoobay ayaa muujinaysa sida ay diblomaasiyadda Somalia ugu fashilantay isku day kasta oo ay ku doonaysay inay ku hor istaagto heshiiska lagu maalgalinayo dekedda Berbera.
Waxaa ay dawladda Somalia hore dacwad ugu gudbisay uruka jaamacadda Carabta hase yeeshee waxa uu ururka jaamacadda carabu arrinatn uga hadlay si aan u cuntamin Somalia, isla markaana aan ka caawinayn in heshiiskani baaqdo, sidoo kale waxay cadaadis saartay safiirka Imaaraadka u fadhiya Muqdisho hase yeeshe waxba kama bedelin fulinta heshiiskan.
Ugu dambayn wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo shalay BBC-da la hadlay ayaa sheegay in mashruuca lagu casriyeynayo dekedda Berbera dhawaan si rasmi ah loo daahfuri doono, sidoo kalena arrinta saldhiga Millatari gabo-gabo tahay.